2017 April 19 | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
Daawo :Xaaladda Hooyo Somaliyed Oo Saygeeda Looga Musaafurinyo Somaliya , 8 Caruur Korintooda Ayaa Hor Taal
Sida aynu wararkeena hore ku sheegnay ,dowladda Mareykanka ayaa qorsheyneysa in 5000 qaxooti Somali ah dalkaas ka musaafuriyaan kuwaas oo badankooda loo diiday in la siiyo magan galyo Hadaba Abdi Salaan Xusen oo ah aabo Somaliyed ayay xereen Police-ka Mareyakanka iyadoo uu qeyb ka noqonayo dadka loo tarxiilayo Somaliya . Aabahaan oo 8 caruur iyo […]
Xog : Mareykanka Oo Qaxootigii Ugu Badnaa Ee Somali Ah Ka Musaafurineysa Dalkaas ,Safaaradda Somaliya Ee Dalkaas Ayaa Qirtay
Afhayeen u hadlay waaxda socdaalka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in Washington go`aansatay in 5 kun Somali qaxooti ku ah dalkaas ay ka musaafuriyaan wadankaas. Waxa uu sheegay in tiradaas ay isugu jiraan kuwo loo diiday codsigooda magangalyo doonka iyo kuwo ku tuntay sharciyada dalkaas sida uu hadalka uu u dhigay . Afhayenkaas ayaa xusay […]
Ra`isul Wasaare Khayere Oo Sameeeyay Ballan Qaad Adag Ka Dib Booqashadii Maanta Ee Wasaaradda Maaliyadda
Ra`isul wasaaraha Somaliya Mr Kheyre ayaa ballan ku qaaday in xukuumadiisa ay xoogga sareyso in si joogta ah u bixiso mushaaraadka shaqaalaha xukuumada Arintaan ayaa timid ka dib booqasho uu maanta ku tagay xarunta wasaaradda maaliyadda oo qeyb ka ahyed safar uu ugu kuur galayo dhowr wasaaradood Ka dib kormeerkaas ayuu Ra`isul wasaaraha saxafaadda ku […]
(SIYAAD)-Wararka aan ka heleyno xarunta gobolka Banaadir ayaa sheegaya in Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed uu albaabada ka xirtay Ku xigeenadiisa iyo Gudoomiyaasha Degmooyinka. Gudoomiyah oo maalmo kahor xilka si rasmi ah ula wareegay ayaan wali wax kulan ah la qaadan Gudoomiye kuxigeenada iyo sidoo kale Gudoomiyaasha Degmooyinka, […]
MUQDISHO(P-TIMES)- Guddoonka Aqalka Sare ee dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa lagu doortay guddiga Dibu eegista Dastuurka Faderaalka, waxaana lagu qeybsaday Hanaanka Nidaamka 4.5, taas oo muujinaysa xubnaha maanta la doortay. Guddiga waxaa ka muuqda xubnaha oo lagu qeybsaday hanaanka beelaha, iyadoo ay shaqo adag u taalo guddiga Dibu eegista Dastuurka Soomaaliya. Sen. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamud-Faroole Sen. […]
FALANQEYN XASAASI AH: Dawladda Farmaajo Iyo Caqabadaha Barnaamijka Heshiisyada Iskaashiga Cusub
Dowladda Soomaaliya waxaa ay isku diyaarisay shirka London, madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada waxaa ay isku afgarteen in la qaato heshiisyada iskaashiga cusub ama waxa beesha caalamka u taqaano “A New Partnership Agreement”. Qorshaha beesha caalamka ee “ Heshiisyada iskaashiga cusub”, waxaa ka horreeyay qorshe ay dowladda u dejisay 3da sano ee soo […]
GAROOWE(P-TIMES)- Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada & Tacliinta sare ee dawladda Puntland Abshir Aw Yuusuf Ciise iyo masuuliyiinta degmada, Suldaan Siciid Maxamed Garaase ayaa si wadajir ah u dhigax-dhigay dhismaha cusub ee Jaamacadda Caluumta & Farsamada oo laga hirgalinayo magaalada Garoowe ee caasumada Puntland. Eng Abshir Cabdullaahi Diiriye oo kamid ah Abaabulayaasha Jaamacadda Caluumta & Farsamada ee […]
Aqalka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo hadda ku shiraya xaruntooda magaalada Muqdisho ayaa isku raacay in ra’isul wasaare Xasan Khayre iyo xukuumaddiisa laga dalbado in ay hor yimaadaan golaha shacabka, sharaxaadna ka bixiyaan heshiiska Somaliland iyo Imaaraadka ee Berbera. Arrintan ayaa timid, kadib markii guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sh. Cusmaan Jawaari […]
SAWIRRO: RW Kheyre oo kormeer kedis ah ku tagay Xarunta Wasaaradda Maaliyadda DFS muxuu ku arkay?
MUQDISHO(P-TIMES)- Ra’iisulwasaaraha dawladda Faderaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa subaxnimadii hore ee saaka booqasho kedis ah ku tagay xarunta Wasaaradda Maaliyada ee Xukuumada, oo ay hadda ka socdaan xaruntaas shaqada dawladda loo hayo. Raysalwasaaraha ayaa qol-qol u tagay xarumaha Wasaaradda Maaliyada ee dawladda Faderaalka, waxaana uu la kulmay shaqaalaha oo shaqeynaya. Wasiiru dowlaha Wasaaradda & […]
MUQDISHO(P-TIMES)- Hogaamiyaasha Siyaasadda ee Soomaaliya ayaa isku raacay dhismaha ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed oo hadda la dadajiyo, waxay go’aansadeen in tiradda laga dhigo 18,000 oo Askari, ayna noqdaan kuwa matali karra magaca Ummadda Soomaaliyeed. Ciidamadan waxay kala joogi doonaan xerooyin kala duwan oo dhamaantood kuyaala gudaha dawlad gobaleedyada dalka, waxayna si siman ugu shaqeyn doonaan […]